သင်က ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ ??? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သင်က ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ ???
သင်က ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ ???
- April Star
Posted by April Star on Mar 17, 2012 in Copy/Paste, How To.., Relationships & Family | 15 comments
သူငယ်ချင်းတို့သင်ဟာသင့်ချစ်သူအပေါ်ဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာမှန်းကြည့်ချင်လား။ ဒါဆိုဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်လိုက်နော်။ မေးခွန်းတွေကိုကြိုတော့မကြည့်ရဘူးနော်။ ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့အဖြေရဲ့ ဘေးကရေးထားတဲ့နံပါတ်တွေအတိုင်းဆက်ဖြေသွားရုံပါ။ ဥပမာ-နံပါတ် 1 မှာသင်က တိုကျိုကိုရွေးချယ်ခဲ့ရင် တိုကျိုရဲ့ ဘေးမှာရေးထားတဲ့အတိုင်း မေးခွန်း နံပါတ်3ကိုသွားဖြေရမှာပါ၊ မေးခွန်းနံပါတ်2ကိုဖြေဖို့ မလိုပါဘူး။ မေးခွန်းတိုင်းဖြေဖို့ မလိုပါဘူး။ 1 ။ သွားချင်တဲ့နေရာတစ်ခုရွေးပါ။ ပေကျင်း – go to question2တိုကျို – go to question3ပဲရစ် – go to question42 ။ စိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တဲ့အခါငိုတတ်သလား? ငိုတတ်တယ် – go to question4မငိုတတ်ဘူး – go to question33 ။ သင်ဟာချစ်သူနဲ့ ချိန်းထားတယ်၊ ပြောထားတဲ့အချိန်ထက်တစ်နာရီလောက်နောက်ကျနေတာတောင်သူကရောက်မလာသေးဘူး၊ ဒါဆိုသင်ဘာလုပ်မလဲ? နောက်ထပ်နာရီဝက်တော့ထပ်စောင့်လိုက်မယ် – go to question4ချက်ချင်းပဲပြန်တော့မယ် – go to question5လာတဲ့အထိစောင့်မှာပေါ့ – go to question64 ။ တစ်ယောက်ထဲရုပ်ရှင်သွားကြည့်တတ်လား? အင်း – go to question5ဟင့်အင်း – go to question65 ။ ပထမဆုံးချိန်းတွေ့ ချိန်မှာ သူကသူ့ ကိုနမ်းဖို့ တောင်းဆိုလာရင် ဘာလုပ်မလဲ? မနမ်းပါဘူး – go to question6သူ့ လက်ခုံကိုပဲဖွဖွလေးနမ်းမယ် – go to question7ကိုယ့်ချစ်သူပဲ၊ နမ်းမှာပေါ့– go to question 86။ သင်ကဟာသဥာဏ်ရွှင်တဲ့သူလား ဟုတ်တယ် – go to question7မဟုတ်ဘူး – go to question 87။ သင်ဟာဘယ်အရာမဆိုဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူလား ထင်ပါတယ် – go to question9မဟုတ်ပါဘူး – go to question 10 8 ။ တကယ်လို့ သင့်မှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိရင် ဘယ်လိုလူအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ချင်သလဲ ယောင်္ကျားအဖြစ် – go to question9မိန်းမအဖြစ် – go to question 10 ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါ – TYPE D ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ )9။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာချစ်သူတစ်ယောက်ထက်ပိုထားဖူးသလား။ ထားဖူးတယ် – TYPE B ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ ) မထားဖူးပါ – TYPE A ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ ) 10 ။ သင်ဟာလိမ္မာပါးနပ်သူလို့ ထင်ပါသလား။ ထင်ပါတယ် – TYPE D ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ ) မထင်ပါဘူး – TYPE C ( အောက်မှအဖြေကိုကြည့်ပါ ) အဖြေ TYPE A: Congratulations! သင်ဟာတစ်ဖက်သားအပေါ်အရမ်းကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်၊ ချစ်သူရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာသင်ဟာချစ်စဖွယ်အလှက်ိုပိုင်ဆိုင်ထားသူအဖြစ်ရှိနေမှာပါ သင်ဟာချောမောလှပရုံတင်မက ဟာသဥာဏ်ရှိသူ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးလူတွေကိုဘယ်လိုပေါင်းသင်းရမယ်၊ အချိန်ကိုဘယ်လိုခွဲဝေအသုံးချရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိသူပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာလူတွေကြားမှာအမြဲတမ်းထင်ပေါ်နေမှာပါ။ TYPE B: Quite good! သင်ဟာဆန့် ကျင်ဘက်အပေါ်အလွယ်တကူတော့ဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့သင့်အပေါ်လွယ်လွယ်ကူကူချစ်မိသွားဖို့ တော့သိပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ဟာသဥာဏ်ကလူတွေက်ိုပျော်ရွှင်မှုရစေမှာပါ။ သင့်ချစ်သူကလဲသင်နဲ့ အတူရှိရတာပျော်နေပါလိမ့်မယ်။ TYPE C: Not bad! သင်ဟာဆန့် ကျင်ဘက်လူအပေါ်အလွယ်တကူမဆွဲဆောင်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဒါပေမဲ့သူတို့ ရဲ့ စိတ်ထဲမှာသင်ရှိနေတာကောင်းတယ်လို့ ထင်ရလောက်အောင်သင့်မှာကောင်းကွက်လေးတွေတော့ရှိပါသေးတယ်။ သင်ဟာရိုးသားဖြူစင်ဖို့ တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့အမြင်မှန်ဖို့ လဲလိုမှာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့သင်ဟာခင်မင်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ကြမှာပါ။ TYPE D: Oh! သင်ဟာတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာလုံးဝကိုဆွဲဆောင်မှုမရှိပါဘူးတဲ့။ သင်ဟာဗဟုသုတလဲသိပ်မကြွယ်ဝသူပါ။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းလဲသိပ်မရှိပါဘူး။ ချစ်သူအပေါ်မှာလဲရိုင်းပျစော်ကားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သင်ဟာဆန့် ကျင်ဘက်တွေကြားမှာသိပ်ပြီးမထင်ပေါ်သူပါ
About April Star
April Star has written5post in this Website..
View all posts by April Star →
ta khar mha ma post bu loh par.
read ya tar asin ma pyay bu htin tal naw.
April star ရေ
စာရိုက်ရင် space လေးခြား ၊ အကြောင်းအရာ ကွဲသွားရင် လိုင်းလေးပါခြားလိုက်ပေါ့။
ဒီစာမျက်နှာရဲ့ ညာဖက်မှာ ဖတ်ပါ မှတ်ပါ ပြီးမှ တင်ပါဆိုတာလေး အရင် ဖတ်ကြည့်ရင် ရှင်းသွားပါမယ်ကွယ်။
အခြားသူတွေကိုလည်း ဦးစားပေးတဲ့ အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို ပို့စ ၂ခု ထက် မပိုရပါဘူး။
နောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရေးများမဟုတ်ခဲ့ရင် မူလစာရေးသူကို လေးစားသောအားဖြင့် credit ပေးရပါမယ်။
source ဘယ်ကဆိုတာ ဖော်ပြပေးပါကွယ်။
ဂေဇက် သူကြီးက မတူသောအတွေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာ ချရေးပါ တဲ့။
နောင် ရေးမယ့် စာတွေကို ကြိုဆိုနေပါတယ်ကွယ်။
Thanksalot par Padonmar yay.
i will take care later.
Edit pyan lope loh ya lar ma thi bu?
edit လုပ်ခွင့် က new member တွေမှာ မရ ပါဘူး။
ကြောင်လေးကတော့ ချစ်သူကို ဆောင့်စွဲ မှု အပြည့်ရှိပါတယ်ကွယ်။ ခွစ်ခွစ်ခွစ်
ကျုပ်ကတော့ လူသားပီသ အောင် ကျင့်ကြံပြုမူနေထိုင်နေတဲ့ လူစားဘဲ ။
အောင်မငီး ရှက်လိုက်တာနော် ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော်မိပါရော ။
သိပ်စိုးတဲ့ သင်္ကြန်ကြယ် ။ လူစိုး
Quite good! သင်ဟာဆန့် ကျင်ဘက်အပေါ်အလွယ်တကူတော့ဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ ဟာသဥာဏ်ကလူတွေက်ိုပျော်ရွှင်မှုရစေမှာပါ။ သင့်ချစ်သူကလဲသင်နဲ့ အတူရှိရတာပျော်နေပါလိမ့်မယ်။
နတ်ဆိုးလေးတော့ တော်တော် မျက်စိရှုပ်သွားပြီ။ အကောင်းဆုံးကတော့ မိမိဘာသာ မိမိ microsoft world မှာ အရင်ရေးပြီးတော့ ကူးတင်ပေးလိုက်တာက ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ့်နဲ့တူတယ်နော်။ အခု ပိုစ့် ကို ကူးယူးတင်ပြထားသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ဖတ်ကောင်းအောင် မိမိ အစီအစဉ်ဖြင့် စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်စေ နိုင်ရန် အတွက်ဖြစ်သည်။
နတ်ဆိုးလေးတော့ တော်တော် မျက်စိရှုပ်သွားပြီ။
ဟုတ်ပါတယ်နတ်ဆိုးလေးရေ့…….. microsoft world မှာ စိတ်ကြိုက်ရေးပြီး ပြင်ဆင်ပြီး မှ တင်တာအကောင်းဆုံးပါ…။ ဒါတောင် စာလုံးပေါင်းမှားတာလေးတွေ ပါပါသွားသေးတယ်…။
လူဆိုသော သတ္တဝါတို့သည် အမှားကင်းသူများ မဟုတ်ကြပေ …
ယင်းသို့ အမှားနှင့် မကင်းဟု ဆိုသော်လည်း ပြန်လည် ပြုပြင်ခွင့်လည်း ရှိသေး၏ …
တစ်တက်စားလည်း ကြက်သွန်၊ နှစ်တက်စားလည်း ကြက်သွန် မဖြစ်ဖို့ရန်သာ အရေးကြီးတော့၏ …။
အဲ … နာ ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေပါလိမ့် …..
တကယ် ပြောချင်တာက ပြန်ပြင်ခွင့် ရရှိအောင် သဂျီးမင်း ဖလားဆီ ရာထူး တိုးတောင်းပါလို့ …..
တိုးမပေးရင် သဂျီး လည်ပင်းကို တက်ညှစ်ကြဗျာ …..
နတ်ဆိုးလေး က အကောင်းပြောပြတာပါ မကြိုက်တဲ့ သူတွေရှိတယ် ဗျို့ နေဝန်းနီ ရေ အနော် လဲ နီနေပြီ ဗျ။ နတ်ဆိုးလေး က အကောင်းနဲ့ အကြံ ပေးတဲ့ ဟာကိုို.ို.ို.ို.ို……………….တော်ပြီပြောတော့ဘူး စိတ်ဂျိုးတယ်…….. နှစ်တု လုံးကို ပေးလိုက်တာများ အနီတွေကြီးပဲ ….
အဲ နီတွေကို ဖျောက်ပေးခဲ့ပြီ …